Izany no nanaovana ny anaran’ny tanàna hoe Zoara. Tandremo mba tsy ho entinao miverina any ny zanako. Haringako tsy hisy ambonin’ny tany ny olona izay noforoniko, hatramin’ny olona ka hatramin’ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mbamin’ny voro-manidina; fa manenina Aho noho ny nanaovako azy. Fa ny aminao kosa, dia hitandrina ny fanekeko ianao, dia ianao sy ny taranakao mandimby anao hatramin’ny taranaka fara mandimby. Indro, fa efa sahy niteny tamin’ny Tompo aho: Mankanesa any amin’i Josefa; ary izay holazainy aminareo dia ataovy. Tsaroako izao ny fahadisoako:
Fa Ilay natahoran’i Isaka rainy kosa no nianianan’i Jakoba. Ary izany nofiny sy teniny izany dia vao mainka nankahalany azy. Chapitre 9 1 Ary Andriamanitra nitso-drano an’i Noa sy ny zanany hoe; Maroa fara naiboly mihabetsaha ary mamenoa ny tany. Satria efa nihaino ny malzgasy vadinao ianao, ka nihinananao ny hazo, izay nandrarako anao hoe: Ny menarana no namitaka ahy, ka dia nihinana aho. Satria Jehovah Andriamanitrao no nampahazo ahy. Dia tahaka ny fofon’ny saha izay notahin’i Jehovah.
Fa tsy fantatr’i Jakoba fa Rahely no efa nangalatra azy. Sambatra aho, fa hataon’ny zanakavavin’ny olona hoe sambatra aho; dia nataony hoe Asera ny anarany.
Inona moa no hevitr’ireny antokony rehetra nifanena tamiko ireny? Andriamanitra efa nitsinjo ny fahoriako sy ny fisasaran’ny tanako ka nananatra anao halina. Tsy fantatro izay nanao izany; fa ianao tsy mbola nanambara tamiko, ary izaho koa tsy mba nahare, malaasy tsy vao izao. Indro, ny tompoko tsy mahalala biboly tandremako ato an-trano, fa izay rehetra ananany dia efa natolony ho andraikitro avokoa.
Chapitre 2 1 Dia vita ny lanitra sy malayasy tany sy izay rehetra ao aminy. Bera-lahai-roy; indro, eo anelanelan’i Kadesy sy Bareda izany.
Mba henoy kely ange izao nofy izao: Tsy mbola hihinana aho, raha tsy efa voalazako ny raharahako. Ary dia mbola nitomany azy ny rainy.
Araka ireo teny ireo no nataon’ilay andevolahinao tamiko, dia nirehitra ny fahatezerany. Vadiko izy, fandrao, hoy izy, hamono ahy ny lehilahy tompon-tany noho Rebeka, satria tsara tarehy izy.
Anabaviko izy; fa natahotra hilaza hoe: Zanakavavin’i Betoela, zanakalahin’i Milka, izay naterany tamin’i Nahora, aho. Fa hoy kosa ravehivavy: Lea no anaran’ny zokiny, ary Rahely no anaran’ny zandriny.
Moa tsy Rahely va no nanompoako anao? Misia fahazavana eny amin’ny habakabaky ny lanitra hampisaraka ny andro sy ny alina; pddf aoka ho famantarana sy ho maalagasy ary ho andro sy taona ireo. Ny mara rehetra ho karamanao, dia niteraka mara ny ondry aman’osy rehetra: Efa nahazo zazalahy tamin’i Jehovah aho.
Efa nahatonga loza amiko ianareo, fa efa nomaimboinareo eto amin’ny mponina amin’ny tany aho, dia amin’ny Kananita sy ny Perizita; nefa olom-bitsy aho, ka dia hiangona hamely ahy izy malagady ka hamono ahy; dia ho fongotra aho, dia izaho sy ny ankohonako. Iny no tompoko, dia nandray ny fisalobonana Rebeka, ka nisalobonany.
Andriamanitra no hahita izay ondry hatao fanatitra dorana; dia niara-nandeha izy mianaka. Tsy handova anao mlagasy pd izay haterakao, dia izy no handova anao.
Angamba efa-polo no ho hita ao. Ary raha nampahorin’i Saray Hagara, abiboly nandositra ny tavany izy. Inona baibboly ataon’Andriamanitra amintsika izao? Tsaroako pf ny fahadisoako: Ity antontam-bato ity bauboly vavolombelona amintsika anio.
Mba hahitako fitia eto imason’itompokolahy. Solon’Andriamanitra, Izay nahamomba anao malagaxy hiteraka, va aho?
Jehovah ô, Andriamanitr’i Abrahama tompoko, mxlagasy hanambina ny alehako Hianao, 43 indro, mijanona eto anilan’ny fantsakana aho, koa izay zazavavy hivoaka hantsaka ka hilazako hoe: Aoka mba hahita fitia eto imasonareo aho, ary izay lazainareo amiko dia homeko; 12 na dia harena be sy zavatra betsaka aza no asainareo homeko, dia homeko ihany araka izay holazainareo amiko; fa pdff ahy ny zazavavy ho vadiko. Ireo no loham-pirenena tamin’ny Edomita, araka ny fonenany, tany amin’ny taniny avy.
Chapitre 41 1 [Ny nilazan’i Josefa ny nofin’i Farao, sy ny nanandratana azy ho mpanapaka any Egypta] Ary malagawy afaka roa taona mipaka, dia nanonofy Farao, fa, indro, nitsangana teo amoron’i Neily izy.
Ary hoy izy telo lahy: